Hiran State - News: Maamul goboleedka Azania State of Somalia oo siweyn looga soo dhaweyey gobolada Jubooyinka kedib markii ay kasbadeen shacbaka deganadaasi.
Maamul goboleedka Azania State of Somalia oo siweyn looga soo dhaweyey gobolada Jubooyinka kedib markii ay kasbadeen shacbaka deganadaasi.
Jubooyinka:(HS)-Maamulka Azania ee dhawaantan looga dhawaaqay dalka Kenya loona doortay inuu madaxweyne ka noqdo Aqoonyahan Somaliyeed oo lagu magacaabo Prof Gaandi ayaa u muuqda mid siweyn ay shacabka Jubooyinka u soo dhaweynaaan hadafka maamulka.
Shir ay iskugu yimaadeen waxgarad, aqonyahano, salaadiin, culimo, siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda jubooyinka oo ka dhacay magaalada Nairobi ayaa lagu caleemasaaray in uu maamulka madaxweyne ka noqdo Professor Gaandi oo hore u ahaa rug cadaa siyaasadeed oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladahii ugu danbeyey.
Mar ay xiriir la sameysay shacaka Jubooyinka qaarkood hs.com ayey inoo xaqiijiyeen iney iyagu horey u soo arkeen kooxo qab qableyaal ah oo jubooyinka xoog ku heystay mamulo maqaar saar ahne halkaasi ka sameyeeyey laakinse ay hada u arkaan maamulkan mid marka ay meesha ka baxaan amaba laga saaro kooxda mayelka adag ee Shabaab iney iyagu taageerayaan maamul goboleedka Azaniya ee Somaliya (Azania State of Somalia).
Ma ahan oo kaliya jubooyinka degaanada dalka Somaliya looga dhawaaqay maamul ay shacabku iyagu leeyahiin waxaa isla dalka Kenya lagu dhisay maamul goboleedka Hiiraan State of Somalia oo ah isaguna midka ugu shacbiyada badan ee heysta taageerada shacabka reer Hiiraan waxeyna labadan maamul iskaka mid yahiin taageerada dhinaca shacbiyada madama ay dadku maamuladan gacantooda ku soo dhisteen.
Inta badan shacabka Somaliyeed ayaa u muuqda kuwo hada dareensan nidaamka maamul goboleedyada iney tahay xalka kaliya ee looga hortagi karo qalalaasaha wadanka ka jira maadama ay dadku iyagu nabadeysanayaan dhulkooda.
Marka aad aragto qaabka ay hada howshoodu u socoto maamulada Azania iyo Hiiran State waa kuwa ugu wanaagsan ee lagu nabadeyn karo amaba looga hirgalin karo deeganadaasi nidaam shaqeeya.waayo Hiiraan State hada meel fiican ayey wax u marayaan maadama ay meel fiican marayaan qorshe dhamaan lagu mideynayo siyaasada reer Hiiraan iyadoo waxkasta lagu saleynayo danta iyo rabitaanka shacabka iyadoo hada siweyn loogu guuleystay in la mideeyo xoogaga reer Hiiraan kedibna looga sii gudbi doono siyaasada guud ee reer Hiiraan. halka maamulka Azania uu ku socdo wadadaasi oo kale oo dadku ay hada siweyn ula socdaan dhaq dhaqaaqa iyo siyaasada maamulka.
Ugu danbeyn nidaamka maamul goboleedyada ayaa hada ah siyaasada kaliya ee shacabka Somaliyeed ka degi karta marba hadii horey loogu fashilmay siyaasadii wajiyada badneyd ee dalka gaarsiisay ilaa magacyo diineed inta lala baxo shacabka lagu dulmiyo.
· admin on June 29 2011 13:02:24 · 0 Comments · 2286 Reads ·
14,667,323 unique visits